အိုးအိမ် အလုပ်အကိုင် အပြောင်းအလဲများ ကျရောက်လွယ်သော ကာလဖြစ်သလို…..ကိုယ်လုပ်နေသမျှ ..ကိုယ်ရှာနေသမျှ အကျိုးစီးပွားတွေကလည်း အပြည့်အစုံ ဖြစ်မလာသေးဘဲ….တစ်ဝက်တစ်ပျက်ပေါင်းများစွာ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင် ခရီးတစ်ဝက် ရောက်သွားမယ့် နှစ်မျိုးလို့ သာဆိုပါရစေ။ ပန်းတိုင်ထိ ရောက်ဖို့ ခက်ခဲတတ်ပေမယ့် …..ပန်းတိုင်မရောက်မီ ခရီးတစ်ဝက်ကို တော့ ကြိုးစားပြီး အရောက်ချီတက်ထားနိုင်မယ့် နှစ်မျိုးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒီတစ်နှစ်အလုပ်အကိုင် ကဏ္ဍ ၊ အကျိုးစီးပွား ရှာဖွေရရှိမှုကဏ္ဍတွေမှာ….တနင်္ဂနွေနေ့ဖွားတွေအဖို့ စိတ်ဒွိဟများရခြင်း ၊ မရေမရာ သောအခြေအနေများပေါ်တွင် ယောင်ချာချာ ဖြစ်နေရတတ်ခြင်းတွေ လွှမ်းမိုးနေပါလိမ့်မယ်။
အလုပ်အကိုင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယတိပြတ်… ကျွန်တော်အကြံပေးရရင်ဖြင့်.. သြဇာညွန့်လေးကို အမြဲဆောင်ထားသင့်သော နှစ်မျိုးလို့ သာ အကြံပေးပါရစေ။
အများစု မေတ္တာရေး ကံကောင်းနိုင်ကြသော ကာလမျိုးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မြားနတ်မောင်က လေးညို့ကို အပေါ်ထောင်ပစ်မယ့်ကာလမျိုးမို့….ကိုယ့်ထက် သာလွန်နေပါစေ…၊ အဆင့်အတန်းကွာနေပါစေဦး….မျှော်လင့်ခွင့်ရနိုင်သောကာလမျိုးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
မူလဇာတာအရ အိမ်ထောင်ရေးကံ ညံ့သည့်ဇာတာရှင်များသော်မှ…ယခုနှစ်အဖို့ အိမ်ထောင်ဖက် အခြေအနေနဲ့ ..မေတ္တာရေးရာကံဇာတာအပိုင်းမှာ အများအားဖြင့် အားသာချက်ကလေး ဖြစ်လာတတ်သည့် နှစ်မျိုးပါပဲ။
ပျိုရွယ်သူများအဖို့လည်း …သောကြာဂြိုဟ်ရဲ့ ဆွဲငင်မှုကြောင့် ..လေးစားမှုနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ရောထွေးနေသော ချစ်မှုရေးရာအခြေအနေမျိုးတွေကို ကြုံတွေ့လွယ်သော ကာလဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ပညာရေး အားနဲတတ်သော ကာလမျိုးပါ။ ကျစရာ ရှိရင်လည်း ဖုန်းကနဲနေအောင် ကျမယ့်ကာလမျိုးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မှန်းထားသလောက် ဂုဏ်ထူး သို့မဟုတ် ရလာဒ်ကောင်းဖြင့် အောင်မြင်နိုင်ခြင်း မရှိဘဲ …ကိုယ်ထင်တာနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်အခြေအနေအချို့ ကြုံတွေ့ကြရတတ်ချိန်ပါ။ သင်ကြားရေး ကဏ္ဍမှာ သူများအကူအညီကိုလည်း ယူနေရတတ်ချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ပြီးသား စာတွေကို ပဲ ပြန်ပြန်နွေးပေးနိုင်မှ …အားသာချက် ဖြစ်လာမယ့် နှစ်မျိုးပါပဲ။
ကျန်းမာရေး အားနဲနေသူများ အနက်ရောင်ကို အထူးရှောင်သင့်သော နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်တောင်အရပ်ကို ညဉ့်အိပ်ညဉ့်နေ သော်လည်းကောင်း ၊ ခရီးဝေးသွားခြင်းမျိုးသော်လည်း ဖြစ်နိုင်သမျှ ရှောင်သင့်သော ကာလပါ။ ရေနဲ့ နီးစပ်ရာမှာ နေထိုင်ခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်နိုင်ပြီး…..၊ ရေသောက်နဲသူများ ကျန်းမာရေးအားနဲလွယ်သော ကာလ လည်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့ဖွားတစ်ယောက်ယောက် နာမကျန်းဖြစ်နေချိန် ဖြစ်နေခဲ့ရင်လည်း အိမ်မှာ ညဉ့်အိပ်ညဉ့်နေ ဧည့်သည် စနေသား လာမယ်ဆိုရင် …လက်မခံသင့်သော ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။
ယုံတာ မယုံတာထက်….အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်မှု ရှိနေတယ်ဆိုတာလောက်တော့ ..သတိပြုမိကြဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
နေရာ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဆိုးကျိုး ပေးတတ်သောနှစ်မျိုးပါပဲ။ နေရင်းထိုင်ရင်း ..ကိုယ့်နေရာ ပျောက်သွားတာ ၊ အလုပ်မှာ နေရာကောင်းမရတတ်တာ၊ နယ်ဝေးကို ပြောင်းရတာ၊ မနေချင်သည့်နေရာမျိုးမှာ နေထိုင်နေရတာ ၊ မပျော်ပိုက်သောလုပ်ငန်းနေရာမျိုးမှာ တာဝန်ယူနေရတာ….စသည်ဖြင့် နေရာနဲ့ ပတ်သက်ရင် ကံမကောင်းတတ်သော ကာလမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
နေအိမ်မှာ … ဒုတ်ဓါးလက်နက် ၊ လောင်စာ တစ်မျိုးမျိုး မ၀င်ကောင်းသော ကာလ ဖြစ်ပြီး ၊ ၀င်လာခဲ့ရင်လည်း …အိမ်ထောင်ရေး မသာမယာ ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ မ၀င်ကောင်းဘူး ဆိုတာက ပုံမှန် အသုံးလိုလို့ ၀ယ်ယူသုံးနေရခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ…တစ်စုံတစ်ယောက်က လက်ဆောင်ပေးတာ၊ သို့မဟုတ် မေ့ကျန်ခဲ့တာ စသည်ဖြင့် ပုံမှန်သဘာဝမဟုတ်သော ၀င်လာခြင်း ရှိမယ်ဆိုရင် …သတိပြုပြီး ပြန်လည် ဖယ်ရှားခြင်း ၊ ပြန်ပေးခြင်း ပြုသင့်ပါတယ်။
အရင်းအနှီးမရှိသူများ …ချစ်ခင်သောအားဖြင့် ရင်းနှီးပေးမယ့် သူ ပေါ်ပေါက်လွယ်သော နှစ်မျိုးပါ။ ဒီတစ်နှစ်အဖို့ တနင်္ဂနွေနေ့ဖွားများအနေနဲ့ ….ကံကောင်းမှုသည်…အရှေ့တောင် အရပ် မှာ တည်နေတတ်ပါတယ်။
အရှေ့မြောက်အရပ်မှာ ဖူးစာဖက် ပေါ်တတ်ပါတယ်။ အနောက်တောင် အရပ်မှာ ကံဆိုးမှု တည်နေတတ်ပြီး ၊ အရှေ့စူးစူး အရပ်မှာတော့ …အကျိုးစီးပွား ရပ်တည်နေတတ်သော နှစ်သစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါကြောင်း…..။
ကဲ……….ဒီလောက်နဲ့ ရပ်မလို့ပါပဲ။ သို့သော် ကတိလေးကလည်း ပေးထားမိလေတော့….အမည်အဖျားစာလုံးများနဲ့ ..မူတည်ပြီး ဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါဦးမယ်။
အမည်အဖျားစာလုံး ဆိုတာက ….အမည်တစ်ခုရဲ့ အဆုံးသတ် နောက်ဆုံးစာလုံးကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် စိုးမိုးထွန်း မှာ …ထွန်းသည် အဖျားစာလုံးပါ။ ဒီဥပမာပေါ်မူတည်ပြီး …..ဆက်လက်ဖတ်ကြည့်ကြပါစို့..။
( ဥပမာအားဖြင့်… စိုးအောင် ၊ အောင်အောင် ၊ အေးအေး ၊ မျိုးသစ်ဦး …စသည် )
အပြောင်းအလည်းများ မုချ ကြုံမယ့် အမည်ရှင်တွေပါ။ အလိုလိုနေရင်း တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ကိုယ်ပါ စိတ်တိုနေရတတ်ပါတယ်။
အမှုအခင်း ဖြစ်လွယ်ချိန် ၊ မင်းအစိုးရများ အရေးယူခြင်း ခံရတတ်ချိန်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အစားမှား ဆေးမှား ဂရုပြုရန်လိုအပ်သော နှစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ….ကျန်းမာရေး အားနဲချိန်ဖြစ်နေမယ် ဆိုရင် ဆေးနှစ်မျိုး အချင်းချင်း မတည့်သော …ဘေးဥပါဒ်မျိုးကို အထူးဂရုစိုက်ဖို့ လိုအပ်ချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
ခါတိုင်းကိုယ်ပေါင်းနေကြ သူတွေ နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်း တွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလာရတတ်ပါတယ်။ လုပ်နေဆဲ အလုပ်အစား အခြားအလုပ်တစ်ခုကို အစပျိုးလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေါ်လာတတ်ချိန်ပါ။ အပြောင်းအလည်းတိုင်းကို ပိုမိုသတိထားပြီး ပြောင်းလည်းနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရပါမယ်။
အထက်လူကြီးအကြီးအကဲများ နဲ့လည်း အတိုက်အခံဖြစ်လွယ်သော ကာလဖြစ်တာမို့…ဒီနှစ်အဖို့တော့….ဒီအမည်ရှင်တွေ ကတော့ …ကံမကောင်း မှု ကြုံမလာအောင် အတော်ကို သိုင်းနင်းကွက်ကျ သွားတတ်မှ ဘေးကင်းပါလိမ့်မယ်။
ယတြာ / ဓါတ်ခဲဟောင်းများ ကို တောင်စူးစူးအရပ်သို့ စွန့်ပစ်ပါ။ လိမ္မော်ရောင် ကို ရှောင်ပါ။ ခေါင်းအုံး သို့မဟုတ် ခေါင်းအုံးစွပ် မကြာခဏ လဲအိပ်ပါ။
တနင်္ဂနွေနေ့ဖွား ၊ အမည်အဖျားစာလုံး တနင်္လာနံ ဖြင့် မှည့်ခေါ်ထားသူများ
( ဥပမာ အားဖြင့် … အောင်မင်းကျော် ၊ အေးမြခိုင် ၊ ခင်ငြိမ်းချမ်း ၊ တင်နီလာခိုင် )
ခရီးဆောင်အိတ်ကောင်းကောင်း ၀ယ်ထားရမယ့်နှစ်ပါပဲ။ ခရီးကံတွေ များမယ့် နှစ်ပါ။
ဒီတစ်နှစ် ..အဖို့..ဘယ်ဟာမှ ရေရေရာရာ မရှိလှဘဲ….ယောင်ဝါးဝါးတွေသာ များနေပါမယ်။ ဟိုနေရာ ကန့်လန့် ကန့်လန့်…သည်နေရာကန့်လန့် ကန့်လန့် နဲ့ .. ကြားကပါနေရမယ့်နှစ်ပါ။ လုပ်သမျှ အလုပ်တွေလည်း တစ်ပိုင်းတစ်စ တစ်ဝက်တစ်ပျက် က ပိုများပါလိမ့်မယ်။ အမှတ်မထင် တစ်ဖက်သတ် အနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းမျိုး ကြုံနိုင်ပါတယ်။ စနေသားသမီး စနေနံ အမည်ရှင်တွေကို ပိုမိုဂရုပြုပေါင်းသင်းရမယ့် ကာလပါ။ လပြည့်နေ့တွေမှာ ကောင်းသောကံ အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်သော နှစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ယတြာ / တနင်္လာနေ့မှာ ဖိနပ်ဟောင်းတစ်ရံကို စွန့်ပစ်ပါ သို့မဟုတ် နွမ်းပါးသူများကို ပေးလိုက်ပါ။ အနောက်တောင် အရပ်ကို အသွားအလာ ဆင်ခြင်ပါ။ အနက်ရောင် လုံးဝ ရှောင်သင့်သော နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပုလဲ ဆင်မြန်းခြင်းဖြင့် … ကောင်းကျိုး ပိုမိုရရှိတတ်သော နှစ်မျိုး ဖြစ်ပါကြောင်း။
ပျိုရွယ်သူများ ….သတင်းကြီးသလောက် ..အချစ်ရေး အဆင်မပြေ ဖြစ်ရတတ်ချိန်ပါ။ အခြားတနင်္ဂနွေအများစု အဖို့… အချစ်ရေးအဆင်ပြေတတ်ချိန် ဖြစ်တာတောင်…ဒီအမည်ရှင်တွေ အဖို့ကတော့ ….နာမည်ကြီး ပြီး ထင်သလိုမဖြစ်တတ်သော ကာလပါပဲ။
အိမ်ထောင်သည်များလည်း အလိုမပြည့် အိမ်ထောင်ရေးသုခ မ၀မလင် ဖြစ်ရတတ်သော ကာလ မျိုးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီတစ်နှစ်က အကျိုးစီးပွား ပိုမိုရနိုင်သော နှစ်မျိုးဖြစ်တာမို့….တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် ပိုမိုကြိုးစားရမယ့် ကာလပါ။ မနှစ်ကတုန်းက ….အလွဲလွဲအချော်ချော်တွေ ဖြစ်ခဲ့သမျှ..ဒီတစ်နှစ် ပြန်တည့်မတ်ရမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးတူပေါင်းစည်း လုပ်ကိုင်နိုင်အောင် ကြိုးစားပြီး တိုးတက်လာနိုင်သော နှစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ခွန်အား ပြန်လည်မြင့်တက်လာနိုင်သော နှစ်မျိုး ဖြစ်တာမို့ …. အကျိုးရှိအောင် တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်သင့်သော နှစ်မျိုးပါပဲ။
ယတြာ / အင်္ဂါနေ့မှာ … အမျိုးသမီး အကြီးအကဲ တစ်ဦးဦးကို ခြေဆုပ်လက်နှယ်ပြုစုခြင်း၊ မွေ့ယာ သို့မဟုတ် ..အထည်အလိပ် လက်ဆောင်ပေးခြင်း ၊ ကန်တော့ခြင်း ပြုသင့်သော အချိန်ပါ။ ခရမ်းပြာရောင် ကို ရှောင်သင့်သော နှစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဓါးခုတ်ရာ လက်ဝင်လျှိုပေးရသလို… အစားထိုး ခံပေးရတတ်သော နှစ်မျိုးပါပဲ။ သူများ ချေးထားတဲ့ငွေကို ကိုယ်က စိုက်ဆပ်ပေးရတတ်ပါတယ်။ စကားပုံရိုင်းရိုင်း နှိုင်းရရင် ငါးတစ်ကာယိုသည့်ချေး ပုဇွန်ဆိတ်ခေါင်းထဲ လာစုနေရသည့် နှစ်မျိုးပါ။ သူတစ်ပါး အရှုပ်တွေ မပြီးနိုင်အောင် ရှင်းနေရတတ်ပါတယ်။ ဒီတစ်နှစ် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင် ချေးစရာ ငှားစရာ အကြောင်းလည်း ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ပညာတတ်လူတန်းစားတစ်ချို့ သို့မဟုတ် …ပညာရှင်အချို့ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကိုလည်း ခံရတတ်သောကာလပါ။ ပညာသင်ယူနေသူများ ဖြစ်ပါက ..ဆရာသမားတွေကို အတော်ကို ဂရုစိုက် ဆက်ဆံရပါလိမ့်မယ်။ ဒီတစ်နှစ်ကတော့ ၀ဋ်ကြွေးကို ဆပ်နေရသလိုပါပဲ လို့ ငြီးတွားရလောက်သော နှစ်မျိုးပါပဲ။
ယတြာ / အများသုံးနေရာတွေမှာ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးခြင်း သည် အကောင်းဆုံးယတြာပါပဲ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ….. ငွေအချို့စာအိတ်ထဲ ထည့်ပြီး လမ်းလေးခွဆုံနေမျိုးမှာ ပံ့သကူ ပစ်လိုက်ပါ။
စွန့်စားရမယ့် အခြေအနေတွေ ပိုမိုပေါ်လာတတ်သော နှစ်ပါပဲ။ မိမိရဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရား ၊ ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်နိုင်မှုတွေကို အစွမ်းကုန် ထုတ်သုံးရမယ့် ကာလဖြစ်ပါတယ်။ ငွေအမြောက်အများ ချေးငှားလို့ရနိုင်သော ကာလလည်း ဖြစ်ပြီး …. စွမ်းရည်ရှိသော ပညာရှင်တွေ ၊ ပညာတတ်အသိုက်အ၀န်းတွေ နဲ့လည်း အလုပ်အကိုင် ကံ ဆက်စပ်နေရတတ်ပါတယ်။ ဒီတစ်နှစ် အဖို့ ကံကောင်းမှု ဆိုတာကို …..စွန့်စားမှုတွေ ၊ ချိန်ဆနိုင်စွမ်းတွေ …ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်တွေ ၊ ယှဉ်ပြိုင်စစ်ထိုးရမှုတွေနဲ့ …ဒွန်တွဲပြီး ရှာဖွေယူရပါလိမ့်မယ်။ ရန်သူ ပိုမိုပေါလာပါမယ်။ တိုက်မယူရင် မရနိုင်တဲ့ ….အခြေအနေတွေကိုချည်း ပိုမို ကြုံတွေ့လာရတတ်ချိန်ပါ။
လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုင် ရာ ပြဿနာ များမြောင်တတ်သော ကာလဖြစ်ပြီး…. အရေးကြီးသော အဆက်အသွယ်အချို့ ဆုံးရှုံးရခြင်း ၊ ပြတ်တောက်ခြင်းများလည်း ဖြစ်ပေါ်လာပါမယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အလုပ်သိပ်လုပ်လို့ ခွန်အား ရစေတဲ့ အသက်ပိုင်းမျိုးပါ။ စွမ်းရည်ကို မထုတ်ရင်သာ ..သို့မဟုတ် ထုတ်ခွင့်မရရင်သာနေမယ်… ထုတ်ခွင့်သာတာနဲ့ မိမိရဲ့ စွမ်းရည်က ခါတိုင်းနှစ်တွေထက် သိသိသာသာ ပိုမိုတက်ကြွ တောက်ပနေပါလိမ့်မယ်။
သတိပြုဖို့က…အရှုပ်ထုပ်တွေက ..ကိုယ့်ဆီကို အလိုလို ပြေးကပ်လာတတ်ချိန်ပါ။ အရှုပ်ထဲမှာ ရှင်းအောင် နေရင်နေ….မနေနိုင်ရင်တော့ အချုပ်ထဲမှာပါ ရှင်းနေရတတ်သော ကာလမို့….အရှုပ်အထွေးတွေထဲ ညှပ်ပါမသွားမိဖို့ လိုအပ်လှပါကြောင်း….။
ယတြာ / ကြာသာပတေးနေ့မှာ … ပညာရှင်များ ၊ မိတ်ဆွေများ ဖြင့် …ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။ တစ်နှစ်လုံး နံ့သာရောင် ၊၀ါညိုရောင် ၊ သနပ်ခါးရောင် တို့ကို သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။ အစိမ်းကတော့ ဖြစ်နိုင်သမျှ ရှောင်သင့်ချိန်ပါ။
ဒီအမည်ရှင်အများစု အဖို့ ဒီနှစ်သည် ကံကောင်းမယ့်နှစ်လို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် ..စက်ပစ္စည်းတစ်ခုခု သို့မဟုတ် အင်္ဂါနေ့ဖွား တစ်ဦးဦး ပုံမှန်မဟုတ်သော ၀င်ခြင်းမျိုး ဖြင့် ၀င်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် မိမိရထိုက်သော ကံကောင်းမှုတွေ လွင့်ပါးသွားစေတတ်တာကို တော့ သတိအထူးပြုရပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် နာရီလက်ဆောင်ရခြင်း ၊ ပြက္ခဒိန်လက်ဆောင်ရခြင်း မျိုးတွေကို မယူဘဲ ရှောင်ခွင့်သာရင် ရှောင်ပါ။
ဂုဏ်ကျက်သရေ တိုးတက်ခြင်း ၊ ဆုံးရှုံးထားသော ဆုံးရှုံးမှု အချို့ ပြန်လည်ရရှိလာတတ်ခြင်း၊ ငယ်ချစ်ဟောင်းဖြင့် ပြန်ဆုံရတတ်ခြင်း စသည်ဖြင့် …တစ်ကျော့ပြန်လာသော ကောင်းကျိုးမျိုးတွေကိုလည်း ပိုမို ရရှိတတ်သော ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။ မွေးချင်းအငယ် ညီညီမ ယောက်ဖ ခယ်မ စသည်ဖြင့် တို့ အနဲငယ် ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ မိမိထံမှာသော်လည်းကောင်း လာသောင်တင်နေတတ်ပါတယ်။
ယတြာ / သံလိုက်တုံးတစ်တုံး (မြင်းခွာပုံသံလိုက်ဖြစ်ပါက ပိုမိုကောင်း) ဆောင်ထားသင့်သော နှစ်ပါပဲ။ သောကြာနေ့မှာ … ပြက္ခဒိန်အဟောင်းတွေ ရှာပြီး စွန့်ပါ။ အရှေ့တောင် အရပ်ကို အသွားအလာဆင်ခြင်သင့်ပြီး…အနီရဲရဲ အရောင်တွေကိုလည်း သတိပြုရှောင်သင့်သော နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်ပါကြောင်း…။
ကြားကနေ ကောင်းအောင်လုပ်ပေးပါလျက်ကယ်နဲ့…မျက်နှာမလှ ကြားညှပ်ရမယ့်ကံက အဆိုးဆုံး ဒီတစ်နှစ်အဖို့ ပေးလာနိုင်ပါတယ်။
လူမျိုးကွဲ နိုင်ငံရပ်ခြား ကံမှာတော့ ကောင်းသော နှစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါကြောင်း။
ယတြာ / စနေနေ့ မှာ သန့်ရှင်းရေးကုသိုလ်ပြုခြင်း ၊ ရေလှုခြင်း ၊ ငါးလွှတ်ခြင်း ၊ငါးစာကျွေးခြင်း အဆင်ပြေတာလေး မဖြစ်မနေလုပ်သင့်သော နှစ်ပါပဲ။ အရှေ့စူးစူး အရပ်ကို အသွားအလာ ဆင်ခြင်သင့်ပြီး …အဖြူရောင်တွေကို နဲနဲလျှော့သုံးသင့်ပါကြောင်း။
အများစု အဖို့…မနေလိုသော နေရာမှာ နေရတတ်ခြင်းကံ သည် ကျရောက်လာပါမယ်။ အနဲစု ကံကောင်းသူများကတော့ မိမိတို့ ဆန္ဒအလိုက် ဝေးသော အရပ်ဒေသ သို့မဟုတ် အစွန့်အဖျားဒေသများမှာ အခြေချခွင့် ကြုံနိုင်ပါတယ်။ နေရာထိုင်ခင်း ကဏ္ဍ မှာ အများစု အဖို့ ကံမကောင်းတတ်သောကာလပါ။ စိတ်ဖိအားများပြီး … အပယ်ခံနေရာမျိုးမှာ ကျရောက်နေရတတ်ပါတယ်။ ဒီတစ်နှစ်လုံး ဟို့လူကို အစွမ်းကုန် ထောက်ပံ့ပေးရ...၊ သည်လူ့အတွက် အစွမ်းကုန် ပံ့ပိုးပေးရမှုတွေ ကြုံလာရတတ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် သွေးမတော်သားမစပ်သည့် သူစိမ်းတွေကို ပိုမို ထောက်ပံ့ ပံ့ပိုးပေးခွင့်မျိုး ကြုံလာပါမယ်။
ယတြာ / ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနေဘက်မှာ … ပညာဒါနပြုခြင်း ၊ အိမ်ခြေယာခြေမဲ့များကို ..ကုသိုလ်ပြုခြင်း ပြုပါ။ နံသာရောင် ၊ ၀ါညိုရောင် ၊ သနပ်ခါးရောင်တို့ကို ရှောင်သင့်သောနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။